HomeArimaha Qoyska5 Arimood Oo Aad U Samayn Karto Gacalisadaadaas Hadii Aad Doonayso In Nafteeda Kaa Jeclaato
Jacaylka ka dhexeeya laba qof ayaa ah sixir khaas ah oo isku haya laba iska doortay dadka kale waliba doonaya in ay jacaylkaas wadaagaan inta ka dhiman noloshooda.
Labada qof ee is jecel waliba jacaylku dhab iyo daacad ka yahay ayaa inta badan jecel in uu midba midka kale soo jiito waliba kali ku noqdo qalbiga midka kale si uuna uga wal-walin in jacalkiisu ku garab kale gabadh kale ama nin kale.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa 6 arimood oo hadii uu ninka Ragga ah u sameeyo gacalisadiisa ay nafteeda ka jeclaanayso waliba qalbigeeda kaligiis dagi doono.
1.In Aad U Sheegto In Ay Qurux Badantajay:
Hadii aad mar walba Amaanto gacalisadaas ma jirto wax aad khasaarayso adiga iyo Ragga kale waxa idiin dhexayn doona in aad gacalisadaad mar walba u sheegto in ay quruxoontahay adiga oo aan u jeedo kale ka lahayn.
Ma odhan karno in ay dumarka oo dhan jecelyihiin in ay afkaaga ka maqlaan hadalkaas laakiin kaliya gabadha aad jeceshahay waxana aad wajigeeda ka dareemaysaa farxad dheeri ah marka aad hadalkaas ku tidhaado.
Marka ay gabadha aad jeceshahay hadalkaas kaa maqasho waliba aaminto in aad u aragto in ay qurux badantahay ma jiri doonto wax wal-wal oo dhanka dareenkeeda ah waxana ay kugu qabi doontaa kalsooni dheeraaad ah iyada oo dhankeeda isku dayi doonta in ay kaa raali galiso dhan walba oo suurtagal ah.
2.In Aad U Qorto Warqad Jacayl ah:
Waxa jira waxyaabo badan oo aad ku odhan karto gacalisadaas iyo gabadha aad jeceshahay adiga oo aan wax hadal ah odhan laakiin dumarka ayaa jecel in ay ogaadaan heerka uu jecelyahay gacaliyeheedu.
Waxa aad u reebtaa wax ay dib ugu laabto waliba Akhriso marka aad maqantahay arintaas oo farxad iyo kalsooni dib ugu soo celinaysa marka uu shaki ka galo jacaylkiina iyada oo dareemaysa farxad iyo daganaan.
Qasab ma ahan in aad u qorto fariin dheer gaar ahaan marka ay fariin qoraal ah tahay laakiin waxa kaliya ee aad ogaysiinaysaa sida aad u dareemayso, waxa ay adiga kuula dhigantahay.
3.In Aad U Kaxayso Safar Aad Labadiina Oo Kaliya Tihiin:
Mid ka mid ah wadooyinka ugu fiican ee aad ku kasban karto jacaylka iyo qalbiga gacalisadaad ayaa ah in aad ogaato ama aad fahamto in aad u baahantihiin in aad wada qadataan raaxo gaar idiin ah adiga oo u qaadaya safar labadiina oo kaliya ah si aad u soo wada qaadataan wakhti fiican.
Ha U kacayn hudheel ay garanayso ama meel ay horay u maqashay laakiin waxa aad u doortaa meel ku cusub oo ayna horay u arkin waxa aad intaas kadib heli doontaa dareenkeeda iyo waliba qalbigeeda oo daacad ah.
4.In Aad garab Istaagto waliba daryeesho marka ay dhibaato soo wajahdo sida marka ay xanuunsato:
Hadii aad doonayso in ay gacalisadoodu nafteeda kaa jeclaato waliba ay kuu hayso qadarin iyo Ixtiraam weyn waa in aanad kaliya jeclaan marka ay fiicantahay ee ay caafimaadka qabto laakiin sidoo kale waa in aad la wadaagto dhibta iyo xanuunka adiga oo garab fadhiisanaya gacnteed qabanaya waliba u muujinaya sida aad u danaynayso.
Marka ay xanuunka ama dhibaatada ka baxdo waxa ay kuu qaadaysaa jacayl ka weyn midkii ay markii hore kuu haysay adiga oo si kama dambays ah oo aan ka laabasho lahayn ku dagi doona qalbigeeda.
5.In Aad Garab Seexato Adiga Oo Aan Doonayn In Aad La Galmooto:
Waxa aad u fudud in aad gabadh la wadaagto Sariir hadii aad jeceshahay iyo hadii kaleba laakiin waxa aad u adag in aad isku daydo in aanad waxba samayn hadii ay kuu sheegto in ayna doonayn ama uuna wakhtigu munaasib ahayn.
Laabtaada gali (waliba si jacayl ku jiro) adiga oo aan lahayn dano kale, taas ayaa u muujinaysa in dareenkaagu ka fog yahay rabitaankaaga shaqsiga ah waxana ay aqoonsanaysaa in aad laabta galisay sababta oo ah aad si dhab ah u jeceshaya waliba ku faraxsantahay inta aad garab jiifto.
Noocan aya ah farxad iyo waliba jacayl muddo dheer jooga waliba jiraya inta aad nooshihiin oo dhan.
Sidee Ayaad Ku Ogaan Kartaa In Gacaliyahaagu/Gacalisadaadu Ku Jeceshahay Adiga Oo Su,aalahan Waydiinaya?